KULMIYE Party » Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo Hambalyeeyey Madaxweynaha Cusub ee la doortay Mudane Muuse Biixi Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo Hambalyeeyey Madaxweynaha Cusub ee la doortay Mudane Muuse Biixi – KULMIYE Party
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo Hambalyeeyey Madaxweynaha Cusub ee la doortay Mudane Muuse Biixi
HomeMadaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo Hambalyeeyey Madaxweynaha Cusub ee la doortay Mudane Muuse Biixi
Taariikh: – 21/11/2017
Hambalyada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee ku aadan Madaxweynaha Cusub ee la doortay Mudane Muse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Mudane Cabdiraxman Cabdillaahi Saylici:
Madaxweynaha JSL Mudane Axmed Maxamed Silanyo, isagoo ku hadlaya magaciisa, ka Xukuumadiisa iyo magaca ummadda Somaliland wuxuu Hambalyo iyo bogaadinba u dirayaa Madaxweynaha cusub ee la doortay Mudane Muse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Mudane Cabdiraxman Cabdillaahi Saylici.
Madaxweynuhu wuxuu Murashaxiinta Xisbiga Kulmiye ee ku Guulaystay tartankii Doorashada Madaxtooyada ALLAH uga baryayaa inuu ku asturo xilkaa iyo Masuuliyadaa culus ee ay ummadda u qaadeen. Madaxweynuhu wuxuu Madaxweynaha la doortay kula dar-daarmay inuu ummadda JSL mideeyo isla markaana uu si cadaalad ah ugu xaq-sooro. Ha ogsoonaado inuu Madaxweyne u yahay kuwii isaga u codeeyey, kuwii aan u codaynin iyo kuwii ka aamusayba.
Sidoo kale, Madaxweynuhu wuxuu hambalyo, ammaan iyo ducoba u diray labada Xisbi Qaran ee UCID iyo WADDANI iyo taageerayaashooda sidii quruxda badnayd ee ay uga qayb qaateen tartankii Doorashada Madaxtooyada.
Madaxweynaha JSL waxa kale oo uu Masuuliyiinta labada Xisbi Ee UCID iyo WADDANI ku bogaadiyey bisaylka siyaasiga ah iyo masuulnimada ay muujiyeen taasoo ay ku aqbaleen kuna qanceen natiijadii ay Komishanka Doorashooyinka Qaranku ka soo saareen Tartankii Doorashada Madaxtooyada ee Dalkeena ka qabsoontay 13.11.2017.